आधा सांसद घटाऔं, बचेको पैसाले सिमानामा पर्खाल लगाऔं सहमत हुनेले १/१/ शेयर गर्नुहोस
June 2, 2020 by साहारा संदेश
अहिले भारतले पश्चिम नेपालको भूभाग मिचेपछि सतहमा आएको राष्ट्रियताको बहसले सिमानामा पर्खाल लगाउनु पर्ने अभिमतलाई थप बल पुगेको छ । तर,सिमानामा पर्खाल लगाउँदा कति बजेट लाग्ला, त्यो सम्भव छ कि छैन । छ भने तारबार लगाउने बजेट कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
सर्वप्रथमतः तारबार लगाउने कुरा गरिरहँदा यो सम्भव छ कि छैन भन्ने विषय कोट्याउनु उपर्युक्त हुन्छ । सिमानामा तारबार लगाउने कुरा अहिलेदेखि मात्रै उठेको होइन । लामो समयदेखि उठेको यो विषय अहिले अलिक बढी चर्चामा आएको मात्रै हो । सिमानामा तारबार या पर्खाल लगाउनु अगाडि पहिलो कदमको रुपमा सिमानाको टुंगो
लगाउनु आवश्यक छ । दोस्रो कदम तारबार लगाउने या पर्खाल लगाउने भन्ने विषयमा भारतसँग सहमति गर्नु आवश्यक छ । सहमतिको पहलले नभए तेस्रो कदमको रुपमा नेपालले आफ्नो सिमाना आफैं पर्खाल लगाउने निर्णय गर्नु पर्दछ । त्यसअघि आत्मनिर्भरताको दह्रो खुट्टा टेक्ने गरी आन्तरिक जनतामा एकताको मनोविज्ञान
निर्माण गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि शासकहरुले अहिलेजस्तो ६ महिना, २ वर्षमा सरकार गिराउने खेल ब’न्द गर्नु पर्छ र जनविश्वास बढाउनु पर्छ । भ्रष्टाचार, अपारदर्शीता र घुषखोरी ब’न्द गर्नुपर्दछ । चौथो कदम भारतबाहेकको छिमेकी राष्ट्र चीन तथा अन्य सहयोगी राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्र संघसमेतलाई सहमत गराउनु पर्दछ र पाँचौं
कदमको रुपमा बजेट व्यवस्थापनको जोहो कसरी गर्ने,कति समयमा पर्खाल लगाइसक्ने भन्ने विषयको ठोस योजना सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । चौथो कदम भारत बाहेकको छिमेकी राष्ट्र चीन तथा अन्य सहयोगी राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्र संघसमेतलाई सहमत गराउनु पर्दछ र पाँचौं कदमको रुपमा बजेट व्यवस्थापनको जोहो कसरी
गर्ने,कति समयमा पर्खाल लगाइसक्ने भन्ने विषयको ठोस योजना सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । उल्लेखित ५ कदममध्ये पहिलो,दोस्रो र चौथो कदम सरकार तथा राजनीतिक पार्टीको उपल्लो तहले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर संयुक्त पहल गर्नुपर्दछ । त्यसो भयो भने तेस्रो र पाँचौं क’दम पुरा गर्न जनताले मनग्ये सहयोग गर्ने देखिन्छ ।
नेपालीको मनोविज्ञान अहिले पनि भारत वि’रोधी छ र पर्खाल लगाउनुपर्छ भन्नेमै एकमत देखिन्छन् । सिमानामा केही तस्करी गरेर फाइदा कमाउने बाहेककाहरुले यो कदमलाई सह्रानीय मान्नेछन् । त्यसो भए जनतालाई एकताबद्ध गर्ने र राजनीतिक पार्टीहरु,सरकारप्रति विश्वास योग्य वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ त ?
मेरो विचारमा पहिलो कुरा त राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरुले भारतको चलखेलमा नअल्मलिने प्रायश्चित गर्नु पर्दछ । दोस्रो कुरा अहिले आम नेपाली जनताले खर्च कटौतिको कुरालाई जोड दिइरहेका छन् । त्यसको पहिलो तारो राजनीतिक दल र संघीयता बनेको छ । सांसदै सांसद
र मन्त्री नै मन्त्रीको देश,सेवा सुविधा र भ्रष्टाचारले डुबेको देशको रुपमा जनताले बुझिरहेका छन् । त्यो कुरालाई चिर्नका लागि अब सबै दलहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या,राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या र प्रदेशको संसद संख्या अर्थात् निर्वाचन क्षेत्रको संख्या घटा’उनु पर्दछ । यसो गर्दा मात्रै जनतामा विश्वासको सं’कट मोच’न हुन सक्दछ ।
यो कदमले पर्खाल लगाउन गर्नुपर्ने तेस्रो र पाँचौ कदमलाई बल पुग्नेछ । जस्तोः हामी सांसदको संख्या घटाउँछौं र सिमानामा पर्खाल लगाउँछौं भन्ने आव्हान सरकारले गरेको खण्डमा स्वतः जनमत राजनीतिक पार्टी र सरकारको पक्षमा आउनेछ र राष्ट्र एकताबद्ध हुनेछ । त्यसका लागि अहिलेको प्रतिनिधिसभा,राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका
सांसद संख्या (निर्वाचन क्षेत्र) ५० प्रतिशत कटौति गर्दा ५ वर्षमा झण्डै ४८ अर्ब २ करोड ७० लाख रकम बच्नेछ । यति ठूलो रकम कसरी बच्छ हेर्नुहोस् हाम्रो सोझो हिसाव । हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सांसद छन् । यस्तै राष्ट्रिय सभामा ५९ र ७ वटै प्रदेशमा ५ सय ५० जना सांसद छन् । यसरी हेर्दा राज्यमा संघको २ सदन र ७ वटा प्रदेशको ७
वटा प्रदेशसभा गरी कुल ८ सय ८४ जना सांसदहरु रहेका छन् । हाल स्वकीय सचिवको तलब र संसद भत्ता,पैदल भत्तालगायतका सुविधासहित सरदर एक सांसदले मासिक करिब एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गरिरहेका छन् । सांसदको संख्या (निर्वाचन क्षेत्र) आधा घटाउँदा मात्रै पाँच वर्षमा २ अर्ब ६५ करोड २० लाख घ’ट्ने छ ।
यस्तै सांसद संख्या घटाएपछि निर्वाचन क्षेत्र पनि घट्छ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि सरकारले बजेट दिनुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन । हाल संघीय सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । विकासकै लागि दिइएको बजेट भएपनि सं’कट मोचनका लागि अब यो बजेट रोक्नु आवश्यक छ ।
यसो गर्दा सोझो हिसावले नै ५ वर्षमा २४ अर्ब ७५ करोड बँच्ने देखिन्छ । यस्तै प्रदेश सांसदलाई २ करोड ५० लाखको दरले प्रतिवर्ष छुट्याएको रकममा पनि आधा निर्वाचन क्षेत्र घ’ट्दा पाँच वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट बच्ने देखिन्छ ।
सांसदको सेवा सुविधा,पारिश्रमिक र संसद विकास कोषको बजेट आधा घ’ट्दा मात्रै राज्यकोषमा पाँच वर्षमा ४८ अर्ब २ करोड ७० लाख रकम बच्ने देखिन्छ । यो बजेट सिमामा पर्खाल लगाउँछौं भन्दा जनताले नमान्ने कुरै छैन । सिमानामा पर्खाल लगाउँदा कति बजेट लाग्ला ?सांसद विकास कोषको रकम र निर्वाचन क्षेत्र आधा घटाउँदा ४८
अर्ब २ करोड बजेट बच्ने देखियो भने सिमानामा पर्खाल लगाउँदा चाहिं कति बजेट चाहिएला ? साढे ६ फिट अग्लो,१०–१० मिटरमा दुईवटा १२ इन्चको पिलर राखेर इन्चको वाल निर्माण गर्दा अहिले काम चल्ने बरिष्ठ इन्जिनियरहरुको भनाइ छ । इन्जिनियरहरुसँगको परामर्श अनुसार उल्लेखित क्षमताको पर्खाल लगाउन
प्रतिकिलोमिटर करिब १ करोड ५० लाख लाग्ने अनुमान छ । भारत र नेपालको सिमाना १ हजार ७ सय ५८ किलोमिटर छ । अब हामी भन्न सक्छौं,त्यही हिसावले भन्ने हो भने सिमानामा पर्खाल २६ अर्ब ३७ करोडमा बन्ने देखियो । पाँच वर्षमा बनाइसक्ने लक्ष्य लिएर काम सुरु गर्ने हो भने मूल्य वृद्धि हुँदा र अत्याधिक खर्च बढ्दा पनि लगभग ५० अर्ब रुपैयाँले मनग्ये पर्खाल लगाउन पुग्ने देखिन्छ ।
Prevदोषीलाई उम्काउन खोजेको भन्दै जनार्दन शर्मा विरुद्ध प्रदर्शन
Nextडाक्टर गोविन्द केसी फेरि अनशनमा एस्ता छन अहिलेका मागहरु